Xukuumada Somaliland Oo Shaacisay Inay Il-dheer Kula Soconayso Saldhiga Turkiga ee Muqdisho – |
Xukuumada Somaliland Oo Shaacisay Inay Il-dheer Kula Soconayso Saldhiga Turkiga ee Muqdisho –
Hargeisa(GNN):-Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa daboolka ka qaaday inay si dhow ula soconayso dhaqdhaqaaqyada ka soo kordha saldhiga millatari ee Turkigu ka furtay Soomaaliya Sabtidii toddobaadkan.
Wasiirka Gaashaan-dhiga oo aanu weydiinay siduu Somaliland u saamayn karo saldhiga Turkiga ee Muqdisho, waxa uu yidhi; “Horta cid waliba meesha ay wax ka helayso way tegaysaa waanay u yeedhanaysaa, laakiin muhiimadu waxay tahay siduu Wasiirka Gaashaan-dhiga Somaliland, Md. Axmed Xaaji Cali Cadami, oo xalay u waramay Wargeyska Dawan, ayaa tafaasiil ka bixiyay mowqifka xukuumaddu ka qabto saldhigan iyo saamayntiisa. Waxaanu caddeeyay inay il-dheer kula socon doonaan saldhigan, isla markaana saldhigii millatari ee Imaaraadka laga furi doono Berbera.
u shaqaynayo iyo cidda ka hawlgelaysa. markaa cidda cadawga kugu ah ee dhibaatada kula rabta, waxa u soo kordha ildheer in aad u yeelato ayaa muhiim ah,innaguna saldhig Millatari oo dalka Imaaraadka aynu la galnay ayaa jira hawsha ugu weyn ee aynu ku dhaqaaqaynaanna waa in la dedejiyo furitaankii saldhigga Mllatari ee Berbera laga samaynayo.”
Wasiirku wuxuu intaas ku daray; “Iswaydiinta ugu wayni waxay tahay Soomaaliya ma inay dalkooda ku aslaaxiyaan oo ay nabadgelyadooda ku dhistaan ayay u samaysteen saldhigan, mise Somaliland ayay u hub urursanayaan. Sidaas awgeed, innagoo aan cidna cadaw ku ahayn haddana is dhigan mayno oo waxa qayrkeen haysto waa in aynu helnaa.”
Wasiir Cadami wuxuu tilmaamay in talaabo kasta oo Soomaaliya ay doonto inay ku hagardaamayso Somaliland waxay aakhirka ku yeelataa cawaaqib xun; waxaanu yidhi;
Soomaaliya waxay is ay is lahaayeen Somaliland wax ku yeela markii ay maamul goboleedyada samaysanayeen. Kadibna waxay is yidhaahdeen meel walba madaxweyne u sameeya. Wixii ay sameeyeen ayaa imika dhib ku noqotay oo wixii ay dawladda Xamar soo saartay ku diiday oo dhibaatadii ay Somaliland ku xaasida is lahayeen ayaa iyaga dib ugu noqotay oo tuulo walba Madaxweyne ayaa u fadhiya.
“Soomaaliya iyaga duco kama filayno innagoo aan xumaan la doonayn ayaynaan haddana faro madhnaanayn oo dhismaha ciidankeenna oo meel fiican marayana waan sii xoojinaynaa, saldhiga Millatari ee Berberana hawshiisa degdeg ayaan u gudo gelayna,”ayuu ku dooday Wasiirka Gaashaan-dhiga Somaliland.
Geesta kalena, Saldhiga Turkiga ee Muqdisho waxa ku baxday lacag dhan konton Milyan oo Doolar. Sarkaal Turkiya ayaa furitaankii saldhigan Muqdisho ka hor u sheegay wakaallada Reuters inuu saldhigani uu ka mid yahay qorsheyaasha dawladda Ankara ay mudnaanta siinayso oo ay suuq cusub ugu raadinayso iibka hubka ay sameeyaan.In ka badan 10.000 oo askari oo Soomaali ah ayaa lagu tabobari doonaa saldhigan. Waxaana markiiba geli kara 1500 oo askari. Waxa furitaankiisii ka qaybgalay taliyaha millatariga Turkiga, Hulusi Akar. Falanqeeyeyaasha siyaasadda ayaa aaminsan in saldhiga Turkiga uu halis u yeelan karo Somaliland, maadaama oo uu Soomaaliya ay Turkiga ka helayso tababaro sare iyo saanad millatari labadaba.